बुटवल पावरको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युतमा ३ चिनियाँ कम्पनीले ७८ प्रतिशत लगानी गर्ने Bizshala -
बुटवल पावरको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युतमा ३ चिनियाँ कम्पनीले ७८ प्रतिशत लगानी गर्ने
काठमाण्डौ । बुटवल पावर कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको १३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनामा तीनवटा विदेशी कम्पनीले लगानी गर्ने भएका छन्।
मनाङ जिल्लामा निर्माण हुने उक्त आयोजनामा ती विदेशी कम्पनीले करिब ७८ प्रतिशत लगानी गर्ने छन्। आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि चिनियाँ कम्पनी एससीआईजी इन्टरनेसनल लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै ४९.४७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी सेयर संरचना परिवर्तन गरिएको छ।
त्यस्तै अन्य दुई चिनियाँ कम्पनी छिङचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको यो आयोजनामा १६.४९ प्रतिशत र क्यूवाईईसी इन्टरनेसनल कम्पनीको ११.६४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ। यो आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनीले भने २२.४० प्रतिशतमात्रै सेयर स्वामित्व राखेको छ।
बुटवल पावर कम्पनीले चिनियाँ साझेदारहरुसँग मिलेर निर्माण गर्न लागेको मनाङ मर्स्याङ्दी पहिलो आयोजना हो। यसबाहके अन्य २ वटा जलविद्युत आयोजना पनि बुटवल पावरले चिनियाँ साझेदारहरुसँग मिलेर निर्माण गर्नेछ।
मनाङ मर्स्याङ्दी आयोजना २०८१ सालसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको बुटवल पावर कम्पनीले जनाएको छ। गत चैतमा आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) समेत भइसकेको छ।
Butwal Power Company Limited Manang Marsyandi Hydro Project
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नेपाल हाइड्रो...
युनियन हाइड्रोपावरले डाक्यो एकैपटक २ वर्षको वार्षिक
काठमाण्डौ । हकप्रद निष्कासन मुख्य अजेन्डासहित युनियन हाइड्रोपावर...
रैराङ हाइड्रोपावरको तेस्रो त्रैमास रिपोर्टमा त्रुटि,
काठमाण्डौ । रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले आफ्नो चालु...
विद्युत बिक्रीको आम्दानी बढ्दा पनि हिमाल दोलखा हा�
काठमाण्डौ । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक...
यसकारण खानीखोला हाइड्रोपावर घाटामा, ईपीएस पनि रु. २१.२७ ले
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा खानीखोला...
निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादन र वित्तीय
काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोरोना महामारीका कारण...
कहिलेसम्म कायम सेयरधनीले एचआईडीसीएलको १००% हकप्रद पाउने ? बुक
काठमाण्डौ । हाइड्राइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट...
राधी विद्युत कम्पनीले १४७.५२% हकप्रद निष्कासन गर्ने
काठमाण्डौ । राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडले झन्डै १५० प्रतिशतको...